၆ လအတွင်း ကုန်သွယ်မှုလိုငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၃၀၀ သန်း ကျော်ရှိ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ၆ လအတွင်း ကုန်သွယ်မှုလိုငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၃၀၀ သန်း ကျော်ရှိ
Workers are seen among the containers at Asia World port in Yangon July 2, 2014. Myanmar's economy should grow 8.5 percent during the current fiscal year, higher than earlier forecast thanks mainly to rising gas production and investment, the International Monetary Fund said in June. Myanmar has launched sweeping economic and political reforms under its quasi-civilian government, which came to power in 2011 following nearly halfacentury of military rule. The government has taken moves to attract foreign investment, create jobs and boost the country's weak infrastructure. REUTERS/Soe Zeya Tun (MYANMAR - Tags: BUSINESS) - RTR3WRQY
၆ လအတွင်း ကုန်သွယ်မှုလိုငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၃၀၀ သန်း ကျော်ရှိ
NLD အစိုးရလက်ထက် ၆ လအတွင်း ကုန်သွယ်မှုလိုငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၃၀၀ သန်း ကျော် ရှိခဲ့တယ်လို့ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့က ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဇန်န၀ါရီလ ၂၀ ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာ ဖော်ပြလာတာပါ။ ဒီလိုဖော်ပြရာမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စုစုပေါင်း ပို့ကုန်တန်ဖိုးက ၆ လအတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၁၅၉ သန်းကျော်နဲ့ စုစုပေါင်း သွင်းကုန်တန်ဖိုးက ၆ လအတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၅၀၃ သန်းရှိခဲ့တာပါ။
ဒါကြောင့်၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အစ ဧပြီလကနေ အောက်တိုဘာလအထိ ၆ လ အတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၃၄၄ ဒသမ ၃ သန်း ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်လုံးမှာ ကုန်သွယ်မှုလိုငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆၀၀၀ ကျော် ရှိလာနိုင်ချေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
NLD အစိုးရ စတင် တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တုန်းကတော့ လည်း စုစုပေါင်း ပြည်ပကုန်သွယ်မှုလိုငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၅၅၀၀ ကျော်ရှိခဲ့တာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အစိုးရ လက်ထက်ဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတုန်းကတော့ ပြည်ပ ကုန်သွယ်မှုလိုငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်ရှိခဲ့တာကြောင့် နှစ်စဉ် ကုန်သွယ်မှုလိုငွေ သန်း ၅၀၀ နီးပါး မြင့်တက်လာနေတာ ဖြစ်ပါတယ်
…………………… ။ ။ ……………………..
၆ လအတှငျး ကုနျသှယျမှုလိုငှေ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂၃၀ဝ သန်း ကြျောရှိ
NLD အစိုးရလကျထကျ ၆ လအတှငျး ကုနျသှယျမှုလိုငှေ အမရေိကနျဒျေါလာ ၂၃၀ဝ ကြျော ရှိခဲ့တယျလို့ ဗဟိုစာရငျးအငျးအဖှဲ့က ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
ဇနျနဝါရီလ ၂၀ ရကျနထေု့တျ နိုငျငံပိုငျသတငျးစာတှမှော ဖျောပွလာတာပါ။ ဒီလိုဖျောပွရာမှာတော့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ စုစုပေါငျး ပို့ကုနျတနျဖိုးက ၆ လအတှငျး အမရေိကနျဒျေါလာ ၈၁၅၉ သနျးကြျောနဲ့ စုစုပေါငျး သှငျးကုနျတနျဖိုးက ၆ လအတှငျး အမရေိကနျဒျေါလာ ၁၀၅၀၃ သနျးရှိခဲ့တာပါ။
ဒါကွောငျ့၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ်ဍာနှဈအစ ဧပွီလကနေ အောကျတိုဘာလအထိ ၆ လ အတှငျး အမရေိကနျဒျေါလာ ၂၃၄၄ ဒသမ ၃ သနျး ရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဘဏ်ဍာနှဈတဈနှဈလုံးမှာ ကုနျသှယျမှုလိုငှေ အမရေိကနျဒျေါလာ သနျး ၆၀ဝ၀ ကြျော ရှိလာနိုငျခရြှေိနတောဖွဈပါတယျ။
NLD အစိုးရ စတငျ တာဝနျယူခဲ့တဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ်ဍာရေးနှဈတုနျးကတော့ လညျး စုစုပေါငျး ပွညျပကုနျသှယျမှုလိုငှေ အမရေိကနျ ဒျေါလာ သနျးပေါငျး ၅၅၀ဝ ကြျောရှိခဲ့တာပါ။ ပွီးခဲ့တဲ့ အစိုးရ လကျထကျဖွဈတဲ့ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ်ဍာနှဈမှာတုနျးကတော့ ပွညျပ ကုနျသှယျမှုလိုငှေ အမရေိကနျဒျေါလာ သနျးပေါငျး ၅၀ဝ၀ ကြျောရှိခဲ့တာကွောငျ့ နှဈစဉျ ကုနျသှယျမှုလိုငှေ သနျး ၅၀ဝ နီးပါး မွငျ့တကျလာနတော ဖွဈပါတယျ
Previous articleအာဆီယံစီးပွားရေး အသိုက်အ၀န်း ဖော်ဆောင်ရာမှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေ
Next articleငွေဆောင်ကမ်းခြေ ဟိုတယ်ဇုန်အတွင်း သိမ်းဆည်းခံ အုန်းခြံမြေပိုင်ရှင်များ ဆန္ဒထုတ်ဖော်